Izindaba - Ungazikhetha Kanjani Izibuko Zobuso Bakho
Wake waba nenkinga yokuzama ukuthola ukuthi hlobo luni lohlaka olulungele ubuso bakho? Kahle unenhlanhla! Ngomhlahlandlela wethu omncane, uzofunda ukuthi kukhona ifreyimu yawo wonke umuntu - futhi singakutshela ukuthi yini okukulungele kakhulu kuwe!
Kungenzeka ukuthi ube nokunye kokuma kobuso okulandelayo: okusaqanda, isikwele, isiyingi, inhliziyo, noma idayimane. Ngokubuka isibuko futhi ubhekisise izici zobuso bakho, ungathola ukuthi yikuphi okufana nawe! Funda ngezansi ukuze ubone ukuthi unganquma kanjani ukuthi unabuphi ubuso bobuso, nokuthi yiziphi izibuko ezizobukeka zikulungele.
Yiziphi Izingilazi Ezimilise Ubuso Oval?
Izinhlobo eziningi zezibuko ezihlukene zihambisana nobuso obusawindi. Ubuso obunesimo se-oval bunamathambo we-cheekbones aphakeme futhi abanzi kancane acishe kancane ebunzini. Lesi sakhiwo sobuso obude, obuyindilinga sikuvumela ukuthi ususe cishe noma isiphi isitayela - ikakhulukazi ozimele abakhulu nangaphezulu. Ngokumila kobuso okusaqanda, zizwe ukhululekile ukwenza isibindi ngombala omnandi, ukuthungwa noma ukuma kohlaka. Isikwele, i-trapezoid, ufudu, nonxande - amathuba awapheli!
Iseluleko sethu okuwukuphela kokweqa amafreyimu amancane namafreyimu anezinto ezisindayo zokwakha. Bangangeza ubude obungenasidingo ebusweni bakho obu-oval.
Yiziphi Izingilazi Ezilolonge Ubuso Besikwele?
Izinhlobo eziningi ezahlukahlukene zezibuko zilandela ubuso besikwele. Kuyisinqe ukuba yisikwele! Uma unobuso obumbeke njengesikwele, izibuko eziningi ezinhle zezibuko zamehlo zingathopha izici zakho. Uma kukhulunywa ngokulingana, ubuso besikwele babanzi kakhulu emhlathini nasebunzini. Ngenxa yalokhu kubukeka kuchazwa ngomhlathi oqinile, izingilazi ezihlala phezulu emakhaleni zengeza ubude obuthambisa lobu buso.
Ukudweba ukugxila kuzici zakho eziqine kakhulu, khetha ifreyimu emnyama neyindilinga, kune-angular, frame. Uhlaka lwengilazi eyindilinga luzothamba futhi lungeze ukungafani kuzimpawu zakho ze-angular, kwenze ubuso bakho bube bukhulu Amafreyimu angenamkhawulo futhi angenasiphelo ayindawo enhle yokuqala.